Warshadaha gawaarida 58 mitir ee Shiinaha iyo iibiyaasha | Changyuan
Waa mid aad u la isku halleyn karo oo waarta leh toddobo muuqaal sare oo farsameed ah. Tikniyoolajiyadda qaabdhismeedka korantada ee sii horumarsan, Teknolojiyada hagidda tuubbooyinka firfircoon ee tayo sare leh, tikniyoolajiyadda qaab dhismeedka xasilinta Steadier, tiknoolajiyada Steadier waxay dib ugu noqotaa tikniyoolajiyad buuxda, tikniyoolajiyad buuxda oo lagu kalsoonaan karo hydraulic, tikniyoolajiyada nidaamka hydraulic-cadaadiska heerka hooseeya, badbaado iyo nidaamka kontoroolka korantada ee caqliga badan.
Bamgareyn jilicsan iyo xaddidid hooseeya oo ay ku xiran tahay habka matoorka ee la hagaajiyay, oo la abuuray sanado waayo-aragnimo ah. Nidaamka matoorka oo dhan wuxuu yareyn karaa waqtiga la taaban karo isla markaana wuxuu yareyn karaa heerka kala goynta la taaban karo inta lagu jiro bamgareynta.
Qaab dhismeedka 6-qaybood oo RZ ah, koboca wuxuu leeyahay isku laabid gaaban iyo furfurnaan, tuubada dhamaadka ayaa si dhaqso leh loogu dhaqaaqi karaa meesha la taaban karo ee loo baahan yahay. Labada qaybood ee ugu dambeeya ee kor u kaca ayaa ah mid gaaban, iyadoo la hubinayo in kororku awood u leeyahay inuu ka gudbo meel ciriiri ah.
Tiknoolajiyadda xakameynta wareejinta Rotary
Iyada oo la adeegsanaayo tikniyoolajiyadda cusub ee biriijku u egtahay, codka xawaaraha sare u kaca ayaa 60% hoos loo dhigay.
Burbur aad u sarreeya ayaa xirtay qaybo
Is dhexgalka buuxa ee tikniyoolajiyadda Jarmalka ayaa si weyn kor ugu qaaday waxqabadka. Tuubbada toosan, tuubbada xusul duuban, tuubbada xusullada waaweyn, iyo xusullada yaryar waxay gaari karaan nolol adeeg oo ah 20-30 kun dhudhun; deked siideynta ah iyo dharka kala guurka ayaa gaari kara 40 ilaa 60 kun oo dhudhun; dhererka bistooladdu waxay gaari kartaa 20 kun oo dhudhun; Nolosha adeegga ayaa gaareysa 50 kun oo dhudhun, garaaca goynta wuxuu leeyahay nolol adeeg ah 20 kun oo dhudhun, dhululuubka gaarsiinta wuxuu leeyahay nolosha adeegga 100 ilaa 140 kun oo dhudhun.
Teknolojiyadda is-baarista ciladaha
Xaaladda aaladda ayaa la kormeeri karaa daqiiqad kasta si loo kormeero loona ogaado ciladaha waqtiga dhabta ah, taas oo si wax ku ool ah u soo gaabin karta waqtiga qalabixinta 70%, adiga oo badbaadinaya waqtiga iyo dadaalkaba.
Nidaamka gacanta ee caqliga leh
Kor u qaad gacanta: U riix gacanta kor / hoos u wareeji ama hoos u dhaqaaq si aad si otomaatig ah u furtid ama dib ulaabid kororka.
Dherer hawleed xaddidan: Markaad la shaqayso meelaha caqabadaha ka hor imanaya waxay si wax ku ool ah uga hor tagi karaan waxyeelada keentay.
Tiknoolajiyadda ilaalinta heerkulka xad dhaafka ah:
Qalabka korantada badbaadada waxaa lagu darayaa tuubada dheelitirka dhululubada korantada. Marka culeyska kororku aad u weyn yahay, cadaadiska saliida ee xad dhaafka ah ayaa si otomaatig ah loo siidaayaa si uu uga badbaado koritaanka waxyeelada.
Heerka saliidda dareeraha tooska ah iyo tikniyoolajiyadda ilaalinta:
la socodka waqtiga-dhabta ah ee kaydka saliida, hagta otomaatiga ama joojinta matoorka marka xaddiga saliiddu aan ku filnayn in la hubiyo in nidaamka hawo-mareenka uusan waxyeelloobin.
moodel ： NJ5441THB58 Halbeega Farsamada moodel ： NJ5441THB58 Halbeega Farsamada
dhererka buuxa 13820mm
Soo saarista nidaamka cabirka
Barakaca la taaban karo ee la taaban karoCadaadis sarreeya
Barakaca la taaban karo ee la taaban karo
170m3 / saac
Dhererka guud 4000mm
120m3 / saac
Dhererka guud 2500mm Cadaadiska bamgareynta fekerkaCadaadis sarreeya
Cadaadiska bamgareynta fekerka
Miisaanka qofka 44000Kg
Moodhiska 'Chassis' Sinotruk Shandeka Wakhtiyada bamgareynta fekerkaCadaadis sarreeya
Wakhtiyada bamgareynta fekerka
Qaabka wadista 8 × 4
nooca mashiinka MC11.44-50 Foomka waalka qaybinta S valve
Awoodda soosaarka / xawaaraha 327Kw / 1900RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 260 / 2200mm
Heerarka Emission Wadan V Barokaca matoorka saliida 320 / 380ml / r
Cabbirka taayirrada 385 / 65R22.5 / 315 / 80R22.5 Muuqaalka Hopper 0.6m3
Wheelbase 1950 + 4500 + 1400mm Dhererka quudinta 1500mm
Cabirrada lugta lugta
Dhumuc toosan Dhumuc toosan Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman Dhererka toosan siman Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan Qoto dheer oo toosan Isku-darka sibidhka 160-220mm
Foom isku laabma Foom isku laabma Nidaamka cadaadiska saliida 31.5MPa
Dhererka gacanta koowaadGeeska Dhererka gacanta koowaad 11687mm Mugga haanta saliida 700L
Geeska 90o Nooca nidaamka hydraulic Furan
Dhererka gacanta labaadGeeska Dhererka gacanta labaad 9534mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
Geeska 180 o Qaboojinta saliida dareeraha Hawo qaboojiye
Dhererka gacanta saddexaadGeeska Dhererka gacanta saddexaad 9055mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
Geeska 180 o Habka saliidaha Saliid dhexe oo dhexe
Codka gacanta afraadGeeska Codka gacanta afraad 11362mm
wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
Geeska 240o Bamka saliida weyn Soo noqnoqda
Dhererka gacanta shanaadGeeska Dhererka gacanta shanaad 7271mm Bamka bullaacadda Soo noqnoqda
Geeska 220o Bamka cadaadiska joogtada ah Soo noqnoqda
Dhererka gacanta 6aadGeeska Dhererka gacanta 6aad 4653 Bamka matoorka Soo noqnoqda
Geeska 110o Fallaadhiisu badanyihiin Harvey, Jarmalka
Tuubada tuubada dherer 3m Miisaan dheelitirka korantada Rexroth Jarmal / HBS
Xaggo wareejin kara ± 360 o Manifold Eaton
Ballaca hore ee hore 9475mm Sheet bir ah Waxaa laga keenay Sweden / Baosteel
Dib u ballac ballaadhka ballaadhka 12853mm gacanta fog HBC / Teknolojiyadda / Ohm
Masaafada dhererka dheer ee lugaha hore iyo dambe 10483mm Qalabka korantada Schneider / Omron
Qaabka furfuridda Lugta hore Nooca X
Lugta dambe Lugaha wareega
Hore: 50 mitir bambo gacmeed